DAAWO:Somaliland oo u jawaabtay war aysan jecleysan oo ka soo baxay dowladda UK | Baahin Media
DAAWO:Somaliland oo u jawaabtay war aysan jecleysan oo ka soo baxay dowladda UK
Maamulka Somaliland ayaa ka jawaabay hadal dhawaan kasoo baxay dowladda UK kaasi oo ahaa in muwaadiniinta Ingiriiska aysan u safri karin deegaanada Soomaaliya oo Somaliland ay ku jirto.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye, ayaa sheegay in digniinta kasoo yeertay dowladda Ingiriiska inay tahay mid ku kooban dowladda UK, islamarkaana aysan ku saabsaneyn deegaanada Somaliland.
Wuxuu sheegay in sidoo kale digniintaasi ay ku wajahan tahay deegaanada koofurta Somalia, balse uu la yaabay markii u arkay inay ku jiraan deegaanada Somaliland, meelaha looga digayo muwaadiniinta Ingiriiska inay u safraan.
Wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in magaalada Muqdisho oo todobaadkiiba mar ay qaraxyo ka dhacaan inaan lala barbar dhigi karin deegaanada Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa.
Sidoo kale wuxuu sheegay in deegaanada Somaliland ay yihiin amaan la isku haleyn karo, balse digniinta UK ayaa waxaa ku jirtay in muwaadiniinta aysan u safri meelaha dadweynaha ku kulmaan oo Hargeysa iyo Berbera ay ku jirtay.
Wadamada caalamka ayaa muwaadiniintooda kaga sii diga halista amaan ee dalalka caalamka marka ay helaan xogo dhanka amaanka ah.